40 Jir iska dhigeysa 20 Jir Malaika Arora Ugu Imaaw Arjun Kapoor Damac Waali Ayaa Lagu Riday 20 Jir Ayaa Ugu Dhaarane Sawirada Malaika Hadaa Daawato Bal Nala Daawo (+Sawiro) – Filimside.net
40 Jir iska dhigeysa 20 Jir Malaika Arora Ugu Imaaw Arjun Kapoor Damac Waali Ayaa Lagu Riday 20 Jir Ayaa Ugu Dhaarane Sawirada Malaika Hadaa Daawato Bal Nala Daawo (+Sawiro)
Da’du waa tiro waxaana tusaalahan oo muuqaal ah bixineysa atiriishada caanka ah Malaika Arora oo dunida tuseysa inee wali 20 jir iska dhigi karto si kasto oo ay afartan sano sarre ugu dhaafto wali waa atiriisho is heysa Ragg badana soo jiidan karto.
Sawiradan marka aad daawato waxaad ogaan doontaa sababta Arjun Kapoor qalbiga looga xada iyo waxuu oga hari waayey atiriishadan da’ahaan in badan ka weyn iyo waxa uu ku arkay.
Maanta ayaa sawir qaadayasha sawiro kasoo qaadeen iyadoo GYM-ka ama goobta jirka lagu dhisto ka timid wadada ayee socotay waxayna la sheekeysaneysay saaxiibteda ilaa ay gaarigeeda ka gaarto balse sawir qaadayaasha jirkeeda ayee ku mashquuleen sawirona kasoo qaateen.
Malaika dharkii jimicsiga ayee xirneed oo aad u gaa-gaaban indhaha dadka goobta joogeen iyada kaliya ayee ku mashquleen maadama ay tahay atiriisho soo jiidasho badan inkastoo 43 sano ilaa 45 sano ay jirto waqtigaan.
Arjun Kapoor iyo Malaika Arora farqi ahaan da’dooda waxaa u dhaxeysa 10 sano ilaa 12 sano farqi ah waxaana la sheegay in ay is guursan doonan bartamaha bisha June 2019 inkastoo aan wali shaaca laga qaadin lamaanahan xiriirkoda daafaha caalamka laga hadal hayo.
Akhriste fikirkaada nala wadaag muuqaal ahaan makula tahay Malaika mid u ek 20 jir kadib markaa daawato sawiradeeda hoose ka daawo sawirada shidan ee laga soo qabtay Malaika Arora xili ay GYM-ka katimid:
Waxaa Aqrisay 798
Aad__yo__aad qoftu waa qof bisil
Wey ku khaldi kartaa